Kwethulwe iBMW 7 Series ehamba ngogesi
Intatheli Yazezimoto | April 20, 2022
IZOTHELEKA eNingizimu Afrika ngoNovemba iBMW 7 Series esanda kwethulwa emhlabeni jikelele.
IBMW 7 ihlukene ngezinhlobo futhi kukhona nentsha sha ehamba ngogesi i-i7.
Kuleli kuzokwethulwa iBMW i7 xDrive60 neBMW 740i. I-i7 xDrive60 inenjini kagesi edonsa amasondo angaphambili kuphela nenye edonsa awangemuva nokwenza idonsa ngawo womane.
Inamandla angu-400kW netorque engu-745 Nm futhi lolu huntshu lukwazi ukusuka ku-0 luye ku-100km/h ngemizuzwana engu-4.7 kuthi ijubane elikhulu libe ngu-240km/h. Bathi idla ibhethri elingu-18.4kWh/100km kanti ikwazi ukuhamba ibanga elifinyelela ku-625km.
IBMW 740i yona inenjini kaphethroli engu-3 litrre eyi-six cylinder. Inamandla angu-280kW netorque engu-520Nm. Isebenzisa ugearbox oyi eight-speed steptronic kanti ikwazi ukusuka ku-0 iye ku-100km/h ngemizuzwana engu-5.4.
Ingaphambili licishe lifane neX7 esanda kwethulwa futhi igrille iyakhanya. Izicabha zivuleka futhi zivaleke ngogesi.
Isiyinde futhi yavuleka kunendala. Iwheelbase inyuke ngo-5mm yaba ngu-3 215mm nokuyinto abathi isiza ukwandisa isikhala sabagibeli ngaphakathi.
Inezihlalo zesikhumba futhi inenqwaba yobuchwepheshe obunye obuqeda nesithukuthezi kubagibeli. Kunescreen esisha esibizwa ngeTheatre Screen lapho ukwazi ukudlala khona i-Amazon Fire TV futhi sihambisana nezipikha zeBowers & Wilkins. Uma uthanda uyakwazi ukuxhuma amaheadphones amabili ngeBluetooth. Kunamaremote akhelwe ezicabheni angemuva. Kulesi screen ukwazi ukudlala amavideo kuYoutube, udlale imidlalo, uthole ulwazi nokunye imoto ihamba.
Nangaphambili uyakwazi ukudlala iYoutube njengoba inamascreen nakhona.
Uma uthanda ngemuva ufaka izihlalo ezikuwotawotayo endleleni futhi ukwazi ukufaka neziqethukayo.
Emgwaqeni bathi intofontofo kwazise ine-adaptive air suspension. Nokuyijikisa njengoba iyinde nje kulula ngoba namasondo angemuva ayajika.
Injalo inenqwaba yobuchwepheshe obengeza ezokuphepha. Buhlanganisa ukuthi isho futhi ibhreke uma izoshayisa phambili, adaptive cruise control, iyakusiza ukuhlala emzileni, iyazipaka nokunye.